KISMAYO(P-TIMES)- Ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay hawlgalo ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Diinsoor ee gobolka Baay, iyagoona dagaal la galay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Wararka la helayo hawlgalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada iyaga oo hawlgal kawada deegaanka Misir ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo gaystay khasaarayaal isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Hawlgalkan ayaa waxaa hor kacayey mas’uuliyiinta maamulka degmada Diinsoor, waxaana ay sheegeen in ay Al-Shabaab ka dileen laba xubnood oo ka tirsanaa sidoo kale ay guul weyn ciidamadu ay ka gaareen dagaalka ay la galeen Al-shabaab.
Qaar kamid ah dad ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa waxa ay sheegeen in maamulka degmada Diinsoor uu gudaha degmada kusoo bandhigay maydadka laba xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Diinsoor ayaa waxa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, hayeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay wadaan hawlgalo kala duwan oo ka dhan ah Al-shabaab.